जब विहेको कुराले ज्योतिलाई सताएपछि, फेसबुकमा ज्योतिको स्टाट्स !! – " सुलभ खबर "
अब मन मिल्ने साथी भएको भए पनि लगन कसिहाल्थिन् होला ! तर विचरी ज्योति अहिले सिंगल छिन्। उमेर बढ्दै गएपछि ज्योतिलाई पनि बिहेको चिन्ता बाक्लिदै जान थालेकाले होला, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बेलाबेलामा आफू अविवाहित रहेको घोषणा गर्छिन्।
परिवारको समस्या के हुन्छ भने एउटा समयसम्म कर्कर गर्ने हो, समय घर्किएपछि रहर गरेर हुँदैन। त्यसैले आफैँ खोजोस् भन्ने चाहना पनि होला। बिहे गर्न मन लागेसी फेसबुकमा होइन ज्योतिजी, घरमै घुमाउरो पाराले भन्नु प-यो !
हुन त फेसबुकमा सिंगल छु भन्नु पनि घरका अग्रजलाई झक्झक्याउनु पनि होला ! जे होस्, ज्योतिजी, तपाईंको यो आइडिया गज्जबको छ।
—शुक्रबार बाट साभार